BGR - -7သြဂုတ်လ 14 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းသည် iPhone app များကိုပေးဆောင် Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "7 သြဂုတ်လ 14 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းသည် iPhone app များကိုပေးဆောင်
BGR -7သြဂုတ်လ 14 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းသည် iPhone app များကိုပေးဆောင်
Lors de la rafle d’hier, de nombreuses applications payantes pour iPhone et iPad payantes étaient en vente gratuitement. L'avez-vous manqué? C’est dommage, mais il reste encore quelques cadeaux gratuits si vous voulez ပြန်သွားပြီးရိုက်ထည့်ပါ . Nous avons sept nouvelles applications iOS en vente gratuitement que vous pouvez consulter dans la synthèse d'aujourd'hui, et elles sont répertoriées ci-dessous.
Cet article couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour un nombre limité de personnes. temps par leurs développeurs. BGR n'est affilié à aucun développeur d'application. Il n'yaaucun moyen de dire combien de temps ils seront libres. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou une semaine. Évidemment, la seule chose que nous puissions garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et voyez un prix affiché à côté d'une application au lieu du mot «obtenir», il n'est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l'application quand même, Apple vous facturera. Certaines applications peuvent avoir des achats in-app supplémentaires. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe အဖြစ်မကြာမီထိုအစာပမြေားထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ကျွန်တော်ကိုဖုံးလွှမ်းသောရောင်းအားကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
iPad နဲ့ iPhone အတွက်ရရှိနိုင်။
သင့်ရဲ့ device ကိုသော့ဖွင့်စရာမလိုဘဲ Widgets တွေကနေအတိတ်သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များ Check ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ် !!!
ပြက္ခဒိန် (ခေါင်းစဉ်, နေ့စွဲ, အချိန်, သင်တန်းသားများ, မှတ်စုများ, တည်နေရာ) ရက်တွင်ဖြစ်ရပ်၏အပြည့်အဝအသေးစိတျ
။ Scroll သည် 24 နာရီ
။ ပြသနိုင်ဖို့ကိုရွေးချယ်ပါ / ရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့ကဖုံးကွယ်
setting ထဲကနေ widget ကအမြင့် Check
အဆိုပါ application ကိုအသုံးပြုသူများကကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ကနောက်ဆုံး screen ကိုအောက်မေ့သို့မဟုတ်ယနေ့သို့မဟုတ်လက်ရှိတပတ်တစ်ပတ်မှပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်သည်။
ကောင်းတဲ့ဝစ်ဂျက်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ "သတိပေးချက်" app ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ iOS အတွက်သတိပေးချက်များများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံလျှောက်လွှာ။
ပိုများသော features တွေမကြာမီကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်!
6 ။ ဂိမ်းစင်တာကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
အလွန်သေးငယ်သော Tank ပစ်ခတ်မှုအကြံပေးအဖွဲ့များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 50 တစ်ခုတည်းကစားသမားအဆင့်ကိုအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းတိုက်ဖျက်, သငျသညျတိုးအဖြစ်သင့်တင့်ကားတိုးတက်စေ! သို့မဟုတ် multiplayer mode မှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးအပေါ်တဦးတည်းဆန့်ကျင်တဦးတည်းယူပါ။
- ထို Arcade အတွက်ဂန္ချေမှုန်းရေးအကြံပေးအဖွဲ့ Play
- သုံးတစ်ခုတည်းကစားသမားသည် Modes (19459009)] - မာစတာမှထူးခြားသောရန်သူရှစ်အမျိုးအစားများ
- သင့်ထိန်းချုပ်မှုမှကိုက်ညီသင်ခန်းစာ mode ကို
- ပြင်းထန်သောတူညီတဲ့မျက်နှာပြင် multiplayer
- ဆယ်ပါးထူးခြားတဲ့ multiplayer ရီနာကှငျး
- စီးရီးထဲမှာ custom အရှည်ကိုရွေးချယ်ပါ
- System ကို Upgrade
- တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်း mode ကိုများအတွက်မှတ်သားရမှတ်
- အသံကြော retro Arcade
- Active ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မွမ်းမံမှုများ
ကအရူးရဲ့ငွေမပါဘဲသွားပေမယ့် $ 8,99 ဤ iPhone case ကိုပြုကြဖို့အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါသည် - BGR
သင့်ရဲ့ feed ကိုမီးသတ်တီဗီ Stick pixels အခါသင်ကမုန်း? BGR - ဒီကိရိယာကို 14 $ ဒီနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ပါဘူးဆိုတာသေချာ
Top 10: les artistes qui paient le plus pour Post sur Instagram – VIDEO